Bankiga dhexe oo ka hadlay in dacwado loo haysto qaar kamid ah bangiyada kuyaala Soomaaliya | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Bankiga dhexe oo ka hadlay in dacwado loo haysto qaar kamid ah...
Bankiga dhexe ee Soomaaliya ayaa soo saaray warsaxaafadeed uu ku beeninayo jiritaanka in dacwad laga gudbiyay bankiyada gaarka loo leeyahay ee kuyaala wadanka Soomaaliya.
Masuuliyiinta bankiga dhexe waxay sheegeen in saxaafadda looga been abuurto qaar kamid ah bangiyada dalka, inkastoo bangigu uusan caddayn waxa ay tahay been abuurka laga sameystay bangiyadasi.
Hadalka Bankiga ayaa kusoo aadaya xili warbixin dhawaan lagu daabacay wargeyska Newyork times, taasoo ku saabsanayd in ururka Al-shabaab dhaqaalaha kasoo gala canshuuraha ay ku kaydsadaan bangiyada gudaha ah ee kuyaala Soomaaliya.
Wargeyska Newyork Times oo soo xiganaysay nuqul kamid ah warbixin ay diyaariyeen guddi katirsan Qaramada Midoobay oo baaritan ku sameeyay lacagaha Alshabab kasoo gala cashuuraha, ayaa waxaa warbixinta kasoo muuqday Salaam Somali Bank oo warbixinta lagu sheegay inuu yahay bankiyada maxalliga ah ee Shabaabka dhaqaalaha ku kaydsadaan.
Laakin, warbixinta laguma xusin wax dambi ah ama dacwad ah oo loo haysto bankiga iyo masuuliyiinta madaxda ka ah. Balse, qaar kamid ah baraha bulshada, ayaa lagu faafiyay in bankiga lagu helay inuu taageero argigixisada, dacwadna ay ku socoto.
Bankiga dhexe ee Soomaaliya ayaa tilmaamay in ayaan jirin wax dacwad ah oo lagu soo ogay bankiyada dalka.
Maqaal horeR/Wasaare ku xigeenka magacaaban oo la kulmay Madaxweynaha Uganda.
Maqaal XigaDigniin loo diray Banaanbaxyasha Beledweyne